Iimveliso zokuKhusela ubuqu | Enye into yokufumana iiglavu ze-PE / Latex / Nitrile / PVC
Ukukhokela Iimveliso ezithumela ngaphandle
Sinikezela ngenkonzo yokumisa enye, amakhulu abathengi asithemba ukuba sibabonelele ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu
Uveliso lweMisa luyaFumaneka!
Iimveliso ezikhuselayo zobuqu
Umbutho i-Unidus (HK) ubonelela ngemveliso yokhuseleko esemgangathweni ophezulu ngamaxabiso afikelelekayo. Ukwenza iimveliso zokhuseleko zifikeleleke kwimarike enkulu ngaphandle kokuyekisa umgangatho ibisoloko yenye yeenjongo zethu. Iimveliso zethu zifumaneka ngokulula kubathengi naphi na xa zifuneka, yeyiphi eyona ndawo inzima yokusebenza abakuyo.
Njengomenzi wemveliso ekhokelayo eTshayina, sinika ukhuseleko kunye nesisombululo sezempilo ukuphucula ukhuseleko kwindawo yakho yokusebenza. Amashumi amawaka abantu bathembele kwiimveliso zethu ukwenza indawo yabo yokhuseleko ikhuseleke kwaye yenza nengqondo efanelekileyo kushishino.
Sinceda ukugcina iindleko zakho ziphantsi ngokunikezela ngamaxabiso okhuphiswano kwiimveliso zethu. Sinikezela ngezona zisombululo zibalaseleyo zokusebenzisa iimveliso ezifanelekileyo ukufezekisa iimfuno zabathengi bakho ngaphandle kokufuna ukuchitha iindleko ezongezelelweyo kuthengwa imveliso engeyiyo.
I-Acree inezityalo zayo eTshayina kunye nenethiwekhi ebanzi yokuhambisa kwilizwe liphela. Sinikezela ngaphezulu kwe-3000 + iindidi zezixhobo zokuzikhusela (PPE) kunye nezixhobo.
Xa ukhuseleko lwabasebenzi luqinisekiswa kwindawo yengqesho, amathuba okuba nemveliso kunye nokusebenza ngokukuko aphezulu. Abasebenzi bakho bazakuziva bezithembile kwaye banakho ukujonga umsebenzi owenziweyo kunokuba bakhathazeke ngokhuseleko lwabo kunye nokuba sempilweni xa besemsebenzini.
Ngaphezulu kweminyaka eli-10 yamava kwimveliso yezixhobo ezikhuselayo (i-PPE), iveliswa phantsi kwenkqubo yolawulo lomgangatho eqinileyo eqinisekisiweyo kwi-ISO 9001: 2015 esemgangathweni. Imveliso esemgangathweni eqinisekisiweyo kwimigangatho eyahlukeneyo yamazwe aphesheya kwaye ixhaswe liQela eliQinisekileyo le-R & D ukuphucula okuqhubekayo kuMgangatho weMveliso.
Siza kuphendula kumbuzo wakho ngaphakathi kweeyure ezingama-24. Ixhaswa liqela loMcebisi oKhuselekileyo onamava ukubonelela ngenkxaso yezobuchwephesha kunye neqela loyilo ngaphakathi ngaphakathi ukukunceda ekwenzeni iimveliso ngokwezifiso.
Fumana kwezona zibalaseleyo
Sinikezela ngesona sisombululo sisiso ngokubhekiselele kukhuseleko noluhlu olupheleleyo lweemveliso kunye neenkonzo. Sondela kuthi ukuze sifumane olona tyalo-mali lubalaseleyo ukuqinisekisa indawo yomsebenzi engenangozi.
NgoMvulo- ngolwesiHlanu: 8: 00-18: 30
(Ifowuni kude kube li-17: 30 iiyure)
NgoMgqibelo-8: 00-16: 00
KwaNdlunkulu: FLAT C, 9 / F, INDLU EPHUMELELAYO, NO. 72-76, WING LOK STREET SHEUNG WAN, HONG KONG
Ifowuni: + 86 512 56986025
Ifeksi: +86 512 58577588
Sibuze Nantoni na
Unexesha elingakanani uzenzile iimveliso zePPE
Ukuqala kumvelisi weiglavu ze-PE, emva kophuhliso olungaphezulu kweminyaka eli-10, ngoku sinikezela ngeentlobo ezingaphezu kwe-30 zeemveliso zePPE.
Ngaba uyayamkela OEM ubungakanani ukuze
Ewe, sinokuyila kunye nokuvelisa ngokweemfuno zabathengi nganye.Samkela i-OEM ngobungakanani obuncinci, silindele ukuphuhlisa ishishini kunye.
Ngaba uya kuhlola umgangatho phambi kokuthunyelwa nganye?
Ewe, kwi-odolo nganye, senza uhlolo kwinkqubo yemveliso eyahlukeneyo, kwaye siya kuba neqela lethu elikhethekileyo le-QA lokuhlola umgangatho ngaphambi kokuthunyelwa.
Sithini isiqinisekiso sakho somgangatho kuyo yonke i-odolo ehanjisiweyo?
Siza kuphendula isikhalazo somthengi ngaphakathi kweeyure ezili-12, kwaye sinoxanduva kuyo yonke imiba esemgangathweni.
Ithini imigaqo yakho yokuhlawula?
Yamkela intlawulo nge-T / T (ukuGqithiselwa kweBhanki), L / C ngokubona (ii-odolo ezininzi) ..
Kuthiwani ngexesha lakho lokuhambisa?
Ngokwesiqhelo sihambisa iodolo entsha zingaphelanga iintsuku ezingama-30, kodwa sikwenza nokutyhala kwexesha elincinci.
Ndingasifumana njani isicatshulwa sebhajethi?
Ngokwesiqhelo sinokunika isiseko solwazi kulwazi olufana nomzobo wobume okanye uphawu lweemveliso. Unokufumana isiseko sokucaphula emfanekisweni, nceda uqaphele ukuba xa kunikwa ikhowuti enje sinelungelo lokuhlengahlengisa amaxabiso ukuba ulwazi olungaziwayo lutyhilwe kamva.
Kuthekani ukuba andiyifumani imveliso efanelekileyo endiyifunayo kwiwebhusayithi yakho?
Sifuna ukuba ngumthombo wakho opheleleyo weemveliso zePPE. Sisebenza ukubonelela ngezisombululo ezinceda abathengi bethu baphumelele. I-Acree iyakwazi ukunceda ukuphuhlisa iimveliso ze-PPE ngentsebenziswano nawe. Kwaye kwimeko enqabileyo yokuba asingowona mthombo ungcono, siya kukunceda ukukhomba kwicala elifanelekileyo.
Bhalisa iincwadana zethu
Apha uya kufumana ulwazi lwethu lwemveliso entsha kunye namaxabiso
Ilungelo lokushicilela 2012 - 2022 Vuma | Onke amalungelo agciniwe Ixhaswa ngu-Acree
Funda ngendlela esincede ngayo iimveliso ezili-100 ukuba ziphumelele.